एक महिना पछि फेरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ? – Dailny NpNews
एक महिना पछि फेरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ३०, २०७८ समय: २१:३८:४६
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलावाट शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार समेत गरिसकेका छन् । अब मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारीमा रहेका देउवाका अगाडी सरकारलाई निरन्तरता दिन अझै ठूलो चुनौती छ । उनले एक महिना भित्रै संसदवाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद समाधान भएर माधवकुमार नेपाल समुहले उनलाई साथ दिएन भने देउवाको प्रधानमन्त्री यात्रा टुंगीन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले एक महिनापछि फेरि केपी ओली सत्तामा पुनस्थापना हुन सक्ने दावी गरेका छन् । एक महिनाभित्र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र फेरी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने उनको दावी हो ।
देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संसदमा ठूलो पार्टी भएको हैसियतमा ओलीले फेरी प्रधानमन्त्री दावी गर्न सक्ने बस्नेतको तर्क हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटसम्म स्कर्टिङ गर्ने क्रममा बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘एक महिनापछि एमाले र जसपा मिलेर ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दावी गर्न पाउने कि नपाउने ? देउवाको दावीलाई मान्यता दिने अदालते एमाले र राजपाको दावीलाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ’ ?
देउवाले विश्वासको मत लिन नसके ओलीकै योजना अनुसार मुलुक निर्वाचनमा जाने उनको भनाई छ । बस्नेतले भने, ‘एक महिनापछि केपी ओली फेरि पुनस्स्थापना हुने सम्भावना छ । तर, यदि जालसाँजी गरियो भने पनि ६ महिनापछि हुने चुनावमा एमालेलाई कसैले छेक्न सक्दैन । एमाले बाघ हो । बाघ र सिंहसँग ल ड् न स्यालहरूले हुल बाँ धे र आउनुपर्छ ।’